Istudiyo esitofotofo esikhanyayo embindini - I-Airbnb
Istudiyo esitofotofo esikhanyayo embindini
Isitudiyo esitofotofo embindini wedolophu kunye nomlambo omhle. Indlu yale mihla enemigangatho eyi-18, i-panoramic glazing ye-balcony, imizuzu eyi-5 yokuhamba ukuya kwisikwere esiphakathi esixekweni. Iikhilomitha eziyi-15 ukuya kwisikhululo seenqwelo-moya samazwe ngamazwe i-Baikal, iikhilomitha eziyi-3 ukuya kwisikhululo sikaloliwe. Yonke ifenitshala nezixhobo zombane zintsha. Iflethi ayiqeshwanga kwimicimbi yokonwaba!!! Nceda ungatshayi kule flethi okanye kwindlu ekwicomplex! Amaxwebhu okuxela anikwa abahambi.
ngo-2 emva kwemini Phuma ngo-12pm
Ngaphakathi kukho yonke into ukuze uhlale kamnandi: ibhedi entsha elala abantu ababini, umatrasi owenza i-orthopedic Ormatec, umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu, iwardrobe, isofa enye enesiqingatha sebhedi, iTV, i-Wi-Fi, iTV onokuthatha inxaxheba kuyo, indawo yokuayinela. Ikhitshi linekhitshi, ifriji, i-microwave, iketile yombane, i-hob, ioveni, izitya ezifunekayo. Yonke ifenitshala nezixhobo zombane zintsha. Igumbi lokuhlambela lihonjiswe ngeethayile zeethayile, kukho umatshini wokuhlamba impahla ozenzekelayo.
Indawo enezakhiwo eziphucukileyo, ezikumgama okufutshane neevenkile zokutya, iikhefi, iivenkile zokutyela, amayeza, iindawo ezinkulu zokuthenga nezolonwabo, imidlalo yeqonga, indawo yokumisa izithuthi zikawonke-wonke.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ulan-Ude